Waa Kuwan SADDEXDA Ciyaartoy Ee Ay Chelsea Doonayso Saxeexooda Kaddib Helistii Hakim Ziyech Si Ay Xilli Ciyaareedka Dambe Tartamayaal Dhab Ah U Noqdaan. - Gool24.Net
Kaddib markii ay shalay si rasmi ah gacanta ugu soo dhigeen saxeexa garabka kooxda Ajax ee Hakim Ziyech, Chelsea iyo tababaraheeda Frank Lampard ayaa lagu soo warramayaa inay leeyihiin saddex bar-tilmaameed oo kale suuqa xagaaga.
Sida uu sheegay wargeyska The Sun, Chelsea ayaa isha ku haysa saxeexyada garabka Borussia Dortmund ee Jadon Sancho, Weeraryahanka Lyon ee Moussa Dembele iyo Jude Bellingham oo ka tirsan Birmingham.
Jadon Sancho ayaa ah xiddiga ay dagaalka ugu badan ka maro doonto Chelsea haddiiba ay ka go’antahay inay lasoo wareegtaa maadaama oo ay sidoo kale doonayaan kooxo badan oo Yurub ah oo ay ugu horreeyaan Liverpool iyo Man United.
Sancho oo ay Dortmund ku qiimayso 100 Milyan oo euro iyo wax ka badan ayaa la filayaa inuu xagaaga koox cusub ku biiri doono waana sababta dhalisay inay haatanba saxeexiisa isku sii diyaariyaan kooxo badani.
Dhinaca kale weeraryahan Dembele oo ay Blues horeba ugu fashilmeen saxeexiisa bishii January ayay ku noqon karaan markale xagaaga si ay ugu soo kabaan booskooda weeraryahanka dhexe oo uu hada masuul ka yahay Tammy Abraham.
Xiisaha da’yarka Jude Bellingham ayaa sidoo kale ah mid ay Chelsea la wadaagto Man United oo ahayd kooxdii dhawrka jeer laga soo diiday dalabaadka ay ka gudbisay January, Labada kooxood ayaa helista 16 sano jirkaas ku dagaalami kara xagaagan.
Iyadoo la filayo inay suuqa soo socda Stamford Bridge ka baxaan Oliver Giroud, Willian iyo Pedro Rodriguez oo kamida xiddigaha ugu khibrada badan safka Blues ayuu tababare Lampard isku dayayaa inuu dhisto koox uu xilli ciyaareedka dambe horyaalka ugu tartami karo.